गोरेलाई अदालतमा भेट्न गएका गोरेका बाबुले मुख खोले: 'सनम र गोरेलाई मैले लौरै लौराले कुटेको हुँ'
काठमाडौं । यतिबेला निकै चर्चित बनिरहेको ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य नायिका भनिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’का बुबा नेत्रप्रसाद उप्रेती बिहिबार प्रहरी हिरासदमा रहेका छोरा गोरेलाई भेट्न मोरङ अदालत पुगेका थिए ।
हिजो छोरा अदालत पुग्दा निकै भावुक मुद्रामा देखिएका गोरेका बुवा नेत्रप्रसादले अदालतको बन्द इजलासको ‘ब्रेक टाइममा’ छोरालाई भेटेका थिए। उनले करिव आधा घण्टा अदालतमै छोरासँग गफगाफ गरेका थिए। भेटअघि अदालत अरिसरमा रहेका पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेत्रप्रसादले, आफुले गोरेलाई र सनमलाई पटक पटक के काम गर्छौं केटा हो भन्दै सोधेको तर कहिल्यै पनि उसले नबताएको र राम्रो कम नै गर्छौं भन्ने गरेको पनि बताएका छन्। एक वर्षअघि कुरा स्मरण गर्दै उनले भने, मैले घरमा आएको बेला एक वर्षअघि गोरे र सनमलाई लौरै लौरोले पनि कुटेको थिएँ, तिमीहरुले के काम गरिरहेका छौ ? मैले नराम्रो सुनिरहेको छु, पछी यी कानले गलत सुन्न नपरोस् भनेर ।”
पत्रकारसँग बोल्ने क्रम निकै भावक बनेका नन्दप्रसाद आँखाभारी टिलपिल टिलपिल आँसु गराउदै अहिलेको घटनाले आफूलाई असह्य पीडा भएको बताए। ‘जे सोचेको थिइन, त्यही भयो । मन थामेर बसेको छु, मुटु दह्रो पारेको छु’, उनले भने। प्राय: गोरे बुबाको मुख हेर्ने दिन मात्र आफूलाई भेट्न आउने गरेको र अन्य बेला निकै कम घर आउने गरेको बताउंदै नेत्रप्रस्दले भने, ‘यसपटक मैले आज दूई महिनापछि भेट्दै छु ।’
उनले सुनकाण्डमै पक्राउ परेका पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौला र आफू सँगै पढेको साथी भएको पनि बताए । मोरङ अदालतमा बुधबारदेखि गोरेको बयान चलिरहेको छ । गोरेलाई साढे ३३ किलो सुन र अन्य तस्करीसँगै सनम हत्याको मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ । साढे ३३ किलो सुन प्रकरणसँग जोडिएर सनम शाक्यको हत्या भएको खबरसँगै गोरेका बुबा र आमाले मोरङ उर्लाबारीको घर छाडेका थिए । त्यसपछि उनीहरु कहाँ बसे भन्ने जानकारीमा थिएन ।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ ११, २०७५१२:५८
अस्पताल भर्ना भएकी श्रीमतीको हेरचाह गर्न बसेका श्रीमानकै मृत्यु भएपछि …
अब डेपुटी गभर्नरले तीन वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने !
काठमाडौँमा राति १० बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने !